Brekr B4000 – 🛵 इलेक्ट्रिक स्कूटर 2021
Model B 4000 एक नेदरल्याण्ड्सबाट इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप ब्रेकरबाट एक इलेक्ट्रिक मोपेड हो। नाम ब्रेकर डच बोली शब्द 'ब्रेककेन' को सन्दर्भ हो जसको अर्थ असाधारण मजा लिनु हो।
मोडल बी स्कूटर डिजाइन विगतको सुन्दर मोटरसाइकहरूको साथ साथै भविष्यको प्रतिनिधित्वको लागि श्रद्धांजलि हो; इलेक्ट्रिक यातायात को युग।
Ooter किमी / घण्टाको सीमित शीर्ष गतिको लागि स्कूटरमा wheel००० वाटको इलेक्ट्रिक मोटर पछाडिको इन्टिग्रेटेड छ। मोटरले १ 150० एनएम टोर्क प्रदान गर्दछ।
स्कूटरले दुई लिथियम ब्याट्रीहरूको लागि ठाउँ प्रदान गर्दछ र तीन ब्याट्री आकारका साथ अर्डर गर्न सकिन्छ: सानो (१.4 किलोवाट), मध्यम (१. 1. केडब्लूएच) र ठूलो (२.२ किलोवाट) अधिकतम दायरा १ 190 ० किलोमिटर चार्जको लागि। द्रुत चार्जरको साथ ब्याट्रीहरूको चार्ज समय hours घण्टा हुन्छ।
ब्याट्रीहरू उच्च गुणको हुन्छन् र टेस्ला मोडेल एसमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरू पनि त्यस्तै प्रकारका हुन्छन्।
स्कूटर एक सही स्मार्ट स्कूटर हो कि एक मोबाइल फोन अनुप्रयोग संग कनेक्ट। स्कूटरसँग एकीकृत जीपीएस मोड्युल छ र एन्टी-चोरीमा प्रदान गर्दछ।
BREKR ले ब्याट्रीमा २ बर्षे ग्यारेन्टी र स्कूटरमा years बर्षको वारेन्टी प्रदान गर्दछ।
स्कूटर धेरै र colorsहरूमा उपलब्ध छ र अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
2021 Brekr मोडेलहरू
फिल्टर अवलोकनमा सबै Brekr स्कूटरहरू हेर्नुहोस्: